Wadahadalka LIVE: Man Utd ayaa diyaar u ah inay bixiso Sanchez si uu ugu ciyaaro AS Roma - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Wadahadalka LIVE: Man Utd ayaa diyaar u ah inay bixiso Sanchez si uu ugu ciyaaro AS Roma
Suuqa kala iibsiga ee Horyaalka Premier League wuu xiran yahay, laakiin Yurub inteeda kale wali waxay u furan tahay ganacsi. Intaas waxaa sii dheer, marna lagama daaho inaad sugto Janaayo! Guji halkan si aad u eegto xawilaadihii ugu dambeeyay iyo inaad ku wargeliso warka ugu dambeeya ee hoos ku qoran.
Muuqaalka TOP: Mareykanka ayaa aad u doonaya inuu Sanchez ugu wareejiyo Rome
Ole Gunnar Solskjaer iyo Manchester United ayaa aad ugu baahan inay ka takhalusaan gooldhaliyaha Alexis Sanchez waxayna diyaar u yihiin inay Rom siiyaan amaah si ay amaah ugu amaahdaan reer Chile, sida uu sheegayo Sun .
Xarunta ayaa shaacisay in United ay haatan qorsheyneyso inay ka mamnuuceyso Sanchez keydka, laakiin waxay daneynayaan inay isku dayaan inay iibiyaan ama ugu yaraan inay amaah ku sii daayaan ka hor inta uusan xirmin xafiiska wareejinta Yurub, Sebtember 2.
Roma ayaa dooneysa inay amaah ku qaadato Sanchez laakiin waa ay diidaan inay bixiyaan dakhligiisa weyn. Mushaarkiisa, taasoo la micno ah in United laga yaabo inay bixiso boqolkiiba boqol si ay uga dhigto inuu baxo.
Sanchez ayaa lagu sharaxay inuu saameyn xun ku leeyahay muuqaalkii hore ee tababarihii hore ee United, Jose Mourinho, iyo madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Solskjaer, waxaana Talaadadii la sheegay inuu ku lug lahaa fadeexad dhulka ka dhacday asxaabtiisa. Mason Greenwood .
- Cabbiryada wareejinta: Raadinta lacagaha ee koox kasta oo weyn
- Dhamaan heshiisyada kala iibsiga weyn ee la dhammeeyay
08.25 BST: Wissam Ben Yedder ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay warqad uu macsalaameynaayo taageerayaasha Sevilla u dhaqaaqistiisa Monaco. Wareejinta 40 milyan euro oo ka timid xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska kuna wareejisay naadiga League 1 ayaa lagu dhawaaqay subaxnimadii Arbacada .
Weeraryahanka da'da ah ee 29 ayaa ku biiray kooxda Sevilla ee 2016 isaga oo uga yimid Toulouse lacag dhan 10 milyan waxaana uu dhaliyay goolal 70 kulamadii 138 ee kooxda Andalusiya tan iyo.
Ben Yedder ayaa yidhi: "Waa shucuur weyn markaan ku idhaahdo in la gaadhay waqtigii aan ka tagi lahaa Seville." “Naadi gaar ah oo i siisay seddexdii sano ee ugu dambeysay farxadda ugu weyn mustaqbalkeyga.
Waad ku mahadsan tahay maaliyadan aadka u gaarka ah, waxaan ku guuleystey inaan ku guuleysto riyadeyda xirashada mid kale, oo ah kooxda dhalashada Faransiiska. Mahadsanid maaliyadan, waxaan awoodey inaan u noqdo weeraryahan ixtiraam badan ku leh Yurub… ”
08.00 BST: Mustaqbalka daafacyada dhexe ee Tottenham Toby Alderweireld et Jan Vertonghen shaki weyn ayaa laga qabaa, sida ay sheegeen saxaafadda Ingiriiska.
sida ay Daily Mirror Spurs-ka ayaa ka baqaya inay lumiyaan Alderweireld lacag la’aan dhamaadka dhamaadka xilli ciyaareedkan. Qandaraaska loo sameeyay 30 sano ka hor waxaa ka mid ahaa shuruud u dhigeysa inay diyaar u tahay kaliya 25 milyan ginni xagaagan, laakiin ma jiro wax la taaban karo oo la helay ka hor inta aan la gaarin muddadan.
Alderweireld wuxuu xor u yahay inuu wadahadal la galo kooxo ka baxsan England. laga bilaabo Janaayo 1er si bilaash ah oo loo gudbiyo bisha Juun, haddii aysan heshiis cusub la saxiixanin Spurs.
Isla mar ahaantaana, Daily Mail Waxaa soo baxayay warar sheegaya in saaxiibkiisa reer Belgian, Jan Vertonghen, looga tagay "xanaaq badan" ka dib markii laga saaray kooxda ciyaartii furitaanka ee Premier League ee xilli ciyaareedkii ay la ciyaareen Aston Villa sabtidii.
Vertonghen, 32, wuxuu sidoo kale u arkaa qandaraaskiisa inuu dhacayo dhamaadka ololaha 2019-2020. Warbixinta Mail waxay intaa ku dartay in daafacii hore ee Ajax laga saaray sababa la xiriira jir ahaanshihiisa jir ahaaneed inkasta oo uu si buuxda uga qeyb qaatay xilli ciyaareedkii hore, iyo in qaar ka mid ah asxaabtiisa ay la yaabeen inuu weli fiirso guushii 3-1 kadib markaad ogaatay inuu dhaawac soo gaadhay.
PAPER TALK (waxaa qoray Nick Judd): Bakayoko ma ku laaban karaa Monaco?
Tiemoue Bakayoko ayaa laga yaabaa inuu markale dhaqaaqo, iyadoo Monaco ay xiiseyneyso inay amaah kula soo wareegto Chelsea, sida laga soo xigtay The Sun. Sun .
Bakayoko ayaa u soo ciyaaray kooxda 40 2017 Blues kana soo jeeda dalka Faransiiska ee XNUMX laakiin wuxuu xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay amaah ku qaatay AC Milan, waxayna umuuqataa in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska mustaqbalkiisu uusan hoos imaan. Frank Lampard.
Danny Drinkwater wuxuu horay uga tagay Chelsea isagoo diyaar u ah inuu ku biiro kooxda Burnley isla markaana Bakayoko ayaa hada raaci kara albaabka bixitaanka si uu ugu biiro kooxdii uu la soo ciyaaray markii ay ku guuleysteen horyaalkii 2017. Ololaha 2016-17 Bakayoko ayaa ah kii saddexaad ee Maamulaha waxaana uu sameeyay guud ahaan 92 guud ahaan intii uu joogay.
Galatasaray ayaa isku dayday saxiixa Bakayoko horraantii bishii Agoosto, laakiin xiisaha Monaco ayaa u noqon kara fursad wanaagsan Lampard si uu uga helo Bakayoko mushaharka Chelsea. 19659024] United ayaa isku diyaarineysa isku soo sharaxida Pogba
Manchester United ayaa ku xisaabtameysa dhamaadka dhamaadka suuqa kala iibsiga qaarada Yurub si ay ugu diyaar garoobto dalab daqiiqaddii ugu dambeysay ay ka gudbisay Paul Pogba Real Madrid. 19659007] Mirror ayaa soo warisay in tababaraha Real Madrid, Zinedine Zidane, uu weydiisanayo shaqaalihiisa inuu la soo wareego Pogba ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga Yurub isla markaana uu ka tagi karo kooxda haddii uusan helin.
Ilo wareedyo ayaa u sheegay ESPN FC United ayaa ka soo horjeesan doonta dalab kasta oo ku saabsan Pogba iyo in sannadihiisii ​​26 ee ciyaartooy uu u xaqiijiyey inuu kaqeyb gali doono kooxda xilli ciyaareedkan.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa siiyay labo caawin . ] United gurigeeda 4-0 oo ay la ciyaartay Chelsea maalintii furitaanka xilli ciyaareedka, isagoo ku nuux nuuxsaday muhimadda ay u leedahay Reds inay tahay khadka dhexe ee ugu waxtarka badan.
- Napoli waxa ay u muuqatay inay ka tagtay saxiixa James Rodriguez 19659040] Gazzetta Dello Sport Waxay soo jeedineysaa in AC Milan ay qaadi karto talaabo horay loogu amaahiyay Colombian-ka isla markaana ay dhumiso Isco qiyaas wanaagsan. James ayaa hoosta ka xariiqaya macalin Zidane wuxuuna doonayaa inta ugu badan ee kooxda ka tagi karto. Codsiga amaahda ayaa ku habboonaan kara qof walba isla markaana ka caawin kara Madrid sidii ay u gaari lahayd himilooyinkeeda wareejinta.
- Real Madrid ayaa laga yaabaa inay seegaan Donny van de Beek . Tani waa ka dib Marca kuwaas oo soo sheegaya in aagga isku dhafan ka dib Guusha isreebreebka Ajax 3-2 ee ka dhanka ah PAOK Talaadadii, Van de Beek wuxuu si maldahan u sheegay inuu ku sii nagaaday meesha. 19659046]
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/3920366/live-transfer-talk-man-utd-willing-to-pay-sanchez-to-play-for-roma
Mercato - Mercato: Monaco waxay qaabeysay afgambigii weynaa ee Ben Yedder! - FOOT 01